Online Bachelor Degree – First Online University in Mogadishu Somalia
(Web-based learning) waxaa uu fududeeyay suurta gal nimada in fasalada iyo maadooyinka dhamaantood lagu digto qaab online ah ama (distance learning); ayadoo la isticmaalayo waxbarasho casriyeesan oo fududeenaysa gaarsiinta ardayga casharada, imtixaanaadka & hubinta awooda aqooneed ardayga.
Waxbarashada Online iyo mida fasalka ah waa isku ujeedo fikir ahaan, in ardayga uu waxbarto ka dibna lagu abaalmariyo shahaado. Imtixaanaadka , casharada iyo wax akhrinta fasalada online waxaa lagu sameeyaa dhanka Web-ka. Fasalka Online-ka waxaa dhigo macalin, waxaana fasalka kula fadhiyo arday kale, waxaana macalinka iyo ardayda aad kula xiriiri kartaa email, telefoon ama chat-ka.